IBhodi yoLawulo | Law & More B.V. | Eindhoven kunye neAmsterdam
Blog » IBhodi yoLawulo
IBhodi yoLawulo (apha emva kwegama 'SB') liqumrhu le-BV kunye ne-NV enomsebenzi wokuphatha kumgaqo-nkqubo webhodi yolawulo kunye nemicimbi ngokubanzi yenkampani kunye namashishini ahambelana nayo (Inqaku 2: 140/250 umhlathi 2 yeKhowudi yoLuntu yaseDatshi ('DCC'). Injongo yeli nqaku kukunika inkcazo ngokubanzi ngeli qumrhu. Okokuqala, kuyacaciswa xa i-SB inyanzelekile kwaye iseta njani. Okwesibini, eyona misebenzi iphambili yeSB ijongiwe. Okulandelayo, amagunya asemthethweni e-SB achaziwe. Amandla andisiweyo e-SB kwinkampani yebhodi enee-tier ezimbini ayaxoxwa. Okokugqibela, eli nqaku lisongwa ngesishwankathelo esifutshane njengesiphelo.
Isimo esingakhethwa kunye neemfuno zayo
Ngokomgaqo, ukuqeshwa kwe-SB akunyanzelekanga kwii-NVs nee-BVs. Oku kwahlukile kwimeko ye inkampani yebhodi enamanqanaba amabini (jonga nasezantsi). Isenokuba sisibophelelo esilandelayo kwimigaqo yecandelo (enjengeebhanki kunye neinshurensi phantsi kwenqaku 3:19 loMthetho woLawulo lweMali). Abalawuli abongameleyo banokuchongwa kuphela ukuba kukho isiseko esisemthethweni sokwenza oko. Nangona kunjalo, i-Enterprise Chamber inokutyumba umphathi wobuphathi njengesixhobo esikhethekileyo nesokugqibela kwi Inkqubo yokubuza, esingafunekiyo isiseko esinjalo. Ukuba umntu ukhetha iziko lokukhetha le-SB, umntu kufuneka ke ngoko afake eli qumrhu kumanqaku ombutho (ekufakweni kwenkampani okanye kamva ngokulungisa amanqaku ombutho). Oku kunokwenziwa, umzekelo, ngokwenza umzimba ngokuthe ngqo kumanqaku ombutho okanye ngokuwenza uxhomekeke kwisisombululo sequmrhu elidibeneyo njengentlanganiso kawonke-wonke yabanini zabelo ('GMS'). Kuyenzeka ukuba iziko lixhomekeke kubonelelo lwexesha (umz. Unyaka omnye emva kokusekwa kwenkampani) emva koko akufuneki sisombululo songezelelweyo. Ngokuchasene nebhodi, akunakwenzeka ukuba kunyulwe abantu abasemthethweni njengabaqondisi bolawulo.
Abalawuli abaphetheyo ngokuchasene nabalawuli abangengabo abolawulo
Ngaphandle kwe-SB kulwakhiwo lwamanqanaba amabini, kunokwenzeka ukuba ukhethe ubume bebhodi enye. Kwimeko apho ibhodi ineentlobo ezimbini zabalawuli, ezizezi, abalawuli abongameleyo kunye nabangengabo abalawuli. Imisebenzi yabalawuli abangengabo abolawulo iyafana naleyo yabalawuli abongameleyo kwi-SB. Ke ngoko, eli nqaku liyasebenza nakwabalawuli abangengabo abolawulo. Ngamanye amaxesha kuyaphikiswa ukuba ngenxa yokuba abalawuli abalawulayo nabangekho kwisigqeba bahlala emzimbeni omnye, kukho umqobo osezantsi woxanduva lwabalawuli abangengabo abaphetheyo ngenxa yolwazi olungcono. Nangona kunjalo, izimvo zahlulwe malunga noku kwaye, ngaphezulu koko, kuxhomekeke kakhulu kwiimeko zetyala. Akunakwenzeka ukuba babe nabalawuli ababengekho kwisigqeba kunye ne-SB (inqaku 2: 140/250 umhlathi 1 weDCC).
Imisebenzi yeBhodi yoLawulo
Imisebenzi esemthethweni ye-SB ibilisa imisebenzi yolawulo neyokucebisa malunga nebhodi yolawulo kunye nemicimbi ngokubanzi yenkampani (inqaku 2: 140/250 umhlathi 2 weDCC). Ukongeza, i-SB ikwanomsebenzi njengomqeshi webhodi yolawulo, kuba ithatha isigqibo okanye ubuncinci inefuthe elikhulu kukhetho, (ukuphinda) ukuqeshwa, ukumiswa, ukugxothwa, umvuzo, ukwahlulwa kwemisebenzi kunye nophuhliso lwamalungu ebhodi yolawulo. . Nangona kunjalo, akukho buhlobo busemgangathweni phakathi kwebhodi yolawulo kunye ne-SB. Ngamaqumrhu amabini ahlukeneyo, ngalinye linemisebenzi kunye namandla alo. Eyona misebenzi iphambili yeSB kujongwane nayo ngakumbi apha ngezantsi.
Umsebenzi wokongamela uthetha ukuba i-SB ibeke esweni umgaqo-nkqubo wolawulo kunye neziganeko ngokubanzi. Oku kubandakanya, umzekelo, ukusebenza kwabaphathi, ubuchule benkampani, imeko yezemali kunye nengxelo ehambelana nayo, ubungozi benkampani, ukuthotyelwa kunye nomgaqo-nkqubo wezentlalo. Ukongeza, ukubekwa esweni kwe-SB kwinkampani yabazali nako kuya kufikelela kumgaqo-nkqubo weqela. Ngapha koko, ayisiyiyo kuphela eyokugada emva kwenyani, kodwa ikwa malunga nokuvavanya umgaqo-nkqubo (wexesha elide) ekusafuneka uphunyezwe (umz. Utyalo-mali okanye izicwangciso zomgaqo-nkqubo) ngendlela efanelekileyo ngaphakathi kwemida yolawulo lokuzimela. Kukwakho nokubekwa esweni ngokudibeneyo kwabalawuli bolawulo ngokunxulumene nomnye nomnye.
Ukongeza, kukho umsebenzi wokucebisa we-SB, okwajonga imigca yomgaqo-nkqubo wolawulo ngokubanzi. Oku akuthethi ukuba iingcebiso ziyafuneka kwisigqibo ngasinye esenziwe ngabaphathi. Emva kwayo yonke loo nto, ukwenza izigqibo kwimisebenzi yemihla ngemihla yenkampani yinxalenye yomsebenzi wabaphathi. Nangona kunjalo, i-SB inokunika iingcebiso eziceliweyo nezingacelwanga. Le ngcebiso ayinyanzelekanga ukuba ilandelwe kuba ibhodi, njengoko kusitshiwo, iyazimela kwizigqibo zayo. Nangona kunjalo, ingcebiso ye-SB kufuneka ilandelwe ngokungathí sina ngenxa yobunzima i-SB ebunamathelayo kwingcebiso.
Imisebenzi ye-SB ayibandakanyi igunya lokumela. Ngokomgaqo, ayisiyiyo i-SB okanye amalungu ayo agunyazisiweyo ukuba amele i-BV okanye i-NV (ngaphandle kwemithetho embalwa eyahlukileyo). Ke ngoko, oku akunakufakwa kumanqaku ombutho, ngaphandle kokuba kulandela umthetho.
Amagunya eBhodi yoLawulo
Ukongeza, i-SB inegunya lokulandela amanani asemthethweni okanye amanqaku ombutho. La ngamanye amandla abalulekileyo asemthethweni e-SB:
Ukunqunyanyiswa kwamandla abalawuli, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kumanqaku ombutho (inqaku 2: 147/257 DCC): ukunqunyanyiswa okwethutyana komlawuli kwimisebenzi nakwigunya lakhe, njengokuthatha inxaxheba ekwenziweni kwezigqibo nokumelwa.
Ukwenza izigqibo kwimeko yokungqubana kwamalungu ebhodi yolawulo (inqaku 2: 129/239 kwicandelwana 6 DCC).
Ukuvunywa nokusayinwa kwesindululo solawulo sokudityaniswa okanye sokudanjiswa (inqaku 2: 312 / 334f kumhlathana 4 DCC).
Ukuvunywa kweeakhawunti zonyaka (inqaku 2: 101/210 icandelo 1 DCC).
Kwimeko yenkampani edwelisiweyo: ukuthobela, ukugcina kunye nokuveza ubume bolawulo lwenkampani.
Ibhodi eyongameleyo kwinkampani esemigangatho emibini
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, kunyanzelekile ukuba kusekwe i-SB kwinkampani esemthethweni yamacala amabini. Ngaphaya koko, le bhodi inamagunya ongezelelweyo omthetho, ngokuchitha kwigunya leNtlanganiso Jikelele yaBanini zabelo. Ngaphantsi kwenkqubo yebhodi yamanqanaba amabini, i-SB inegunya lokuvuma izigqibo ezibalulekileyo zolawulo. Ukongeza, phantsi kwenkqubo yebhodi enamacandelo amabini i-SB inegunya lokuchonga nokugxotha amalungu ebhodi yolawulo (inqaku 2: 162/272 DCC), ngelixa kwimeko yenkampani eqhelekileyo okanye encinci ye-tier eli ligunya ye-GMS (inqaku 2: 155/265 DCC). Okokugqibela, kwinkampani enamacala amabini asemthethweni i-SB ikwonyulwe yiNtlanganiso Jikelele yaBanini-zabelo, kodwa i-SB inelungelo elisemthethweni lokutyumba abalawuli abaza kubekwa (inqaku 2: 158/268 (4) DCC). Ngaphandle kwento yokuba i-GMS neBhunga lezeMisebenzi zingenza isindululo, i-SB ayibophelelwanga koku, ngaphandle kokunyulwa okubophelelayo kwisinye kwisithathu se-SB yi-WC. I-GMS iyakwala ukutyunjwa ngesininzi esipheleleyo seevoti kwaye ukuba oku kubonisa isinye kwisithathu senkunzi.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku likunike umbono olungileyo malunga ne-SB. Ukushwankathela, ke ngoko, ngaphandle kokuba isibophelelo silandela umthetho othile okanye xa inkqubo yeebhodi ezimbini zisebenza, ukuqeshwa kwe-SB akunyanzelekanga. Ngaba unqwenela ukwenza njalo? Ukuba kunjalo, oku kungabandakanywa kumanqaku ombutho ngeendlela ezahlukeneyo. Endaweni ye-SB, isakhiwo se-ti-tier esinye sinokukhethwa. Eyona misebenzi iphambili ye-SB kukugada neengcebiso, kodwa ukongeza i-SB ikwanokubonwa njengomqeshi wolawulo. Amagunya amaninzi alandela emthethweni kwaye anokulandela kumanqaku ombutho, eyona ibaluleke kakhulu kolu dweliso lungezantsi. Okokugqibela, sibonisile ukuba kwimeko yenkampani enamacandelo amabini, inani lamagunya linikezelwa yi-GMS kwi-SB kunye noko kubandakanya.
Ngaba usenemibuzo emva kokufunda eli nqaku malunga nebhodi yokujonga (imisebenzi namagunya ayo), ukumisela ibhodi yokujonga, inkqubo ye-ti-tier kunye ne-ti-tier board okanye inkampani yebhodi enamanqanaba amabini? Ungaqhagamshelana Law & More kuyo yonke imibuzo yakho ngalo mbandela, kodwa nakwabanye abaninzi. Amagqwetha ethu abanzi kakhulu, phakathi kwezinye izinto, umthetho wamashishini kwaye bahlala bekulungele ukukunceda.
Post edlulileyo I-ins kunye nokuphuma kwenkampani esemthethweni yamacandelo amabini
Post Next Indima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima